ပျော်စရာမရှိဘဲဖုန်း - ဗီဒီယိုစကားပြော№၁-ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများအြန္လိုင္း
အမျိုးသားများအတွက်၊ဘုန်းချစ်သူများ၏နည်းပညာခဲ့ကြပြန်ရှေးခေတ်ကကတည်းက။ ၏အလယ်တွင်ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်၊ထိုအိပ်မက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားလူခဲ့သည်၊လျှင်မအကြောင်းကား၊ထို့နောက်မှာအနည်းဆုံးအကြောင်းအေးမြသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်။ ဤရက်ပေါင်း၊သာအပျင်းရချင်ကြပါဘူးအသစ်စက်စက်ကြေညာကိရိယာသို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုကိုကွန်ပျူတာအစီအစဉ်။ ဗီဒီယိုစကားပြောလူများအတွက်အဖြစ်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်သည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်:ဟန်ကြောင်းအတွက်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အလိုဆန္ဒအဘို့အမှန်၊အမြင်၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်၊အမျိုးသားများအတွက်ချ...
ကြည့်ရှုကြဘူးငါ့အသက်အရွယ်၊ကျွန်မဟာတက်ကြွ၊လူပေါင်းကောင်းသော၊နှင့်ငါ၏အသွင်အပြင်။ ကုမ္ပဏီအတွက်မိတ်ဆွေများသည်မငြီးငွေ့၊စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်တက်ကြွ၊အကအခုန်နှင့်သီချင်းဆိုရာအုိေက၊ငါရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလူများ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာသ၊ အားလုံးတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့စိတ်ခံစားမှု၊အနည်းငယ်သော၊အလယ်အလတ်နှင့်လွယ်။ တစ်ဦးလျှင်လူသည်အချစ်၊ကျွန်မအရာအားလုံးကိုပြုပါမည်ဟုငါ့တန်ခိုးသည်။ ငါအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်လျောက်ပတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့သဘောမျိုးဟာသ၊မယ့်သူငါ့မိတ်ဆွေကို၊တစ်ဦးအားကြီးသောထောက်ပံ့သောငါချစ်နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းမျ...
တွေ့ဆုံယခုဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်နယ်သာလန်အတွက်။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ၊အချက်အလက်ထည့်သွင်း၊သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်။ ဒီအဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်များ၏ဆိုဒ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သစ်အသိအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ -အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ဘယ်မှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာအခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေအတွက်နယ်သာလန်နဲ့ချက်တင်၊အွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်နိုင်သူတို့ကိုခေါ်။ ထို...
သူလူများစွာရှိပါတယ်ခရီးသွားလာထိုင်းနိုင်ငံသို့ဖြစ်စေ၊အုပ်စုသို့မဟုတ်တည်း။ ဤသည်ကြီးစွာသောရာအရပျယူမှတစ်ဦးအားလပ်ရက်အပြီးအချစ်ဇာတ်လမ်းသို့မဟုတ်ပင်ကိုတွေ့နှစ်ရှည်။ ဒါပေမယ့်သင်သွားမီမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း၊သင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ဘာလုပ်နေကြမဟုတ်ရင်သင်နီးပါးဆက်ဆက်ရှိသည်။ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း၊တစ်ခါတစ်ရံသင်ပင်မကြိုးစားရန်ရှိသည်။ ကိုယ့်မှာဟိုတယ်နှင့်အစွန်အဖျားတက္ကစီမောင်းသူသို့မဟုတ်ဒု၊သင်ရှာစေခြင်းငှါအကောင်းမိန်းကလေးသင့်ရဲ...
အမှန်တကယ်အခမဲ့ရက်စွဲများအတွက် များအတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊ချစ်ချိန်းတွေ့၊စာပေးစာ၊ချစ်ကြည်သို့မဟုတ်ရုံမဟုတ်သော- ရော။ ဒါကြောင့်သင်တို့ဥစ္စာ။ မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းအတွက်ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အပေါ်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်။ ဖန်တီးသင့်ပရိုဖိုင်းနှင့်ချိန်းတွေ့စတင်။ ကျနော်တို့ကအာမခံချက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နေဆဲလုံးဝလုံခြုံ။ ကျနော်တို့ဝေမျှမပေးနိုင်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်နှင့်အတူအဘယ်သူအပြည့်အဝအာမခံချက်သင်၏အမည်ဝှက်။ ရလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကျွမ်းနှင့်အတူကျွန်တော်တ...
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါအမည်မသိချိန်းတွေ့၊ျတွေ့ဆုံရန်၊ဒါပေမယ့်လည်းချက်တင်နှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအပေါ်လူတွေကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာအတွက်အဆင်ပြေတဲ့၊ဖြေလျော့။ အမည်မသိချိန်းတွေ့စကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအရည်အသွေးမြင့်မားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုမြင့်မားသောဘွဲ့ချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး၊အလုပ်လုပ်နာရီဝန်းကျင်နှင့်ဖြစ်ပါသည်အခမဲ့။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စကားပြောခဲ့ရွေးချယ်ဖြတ်ပြီးကလူသန်းပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း။ စတင...
မိန်းကလေးများအတွက် ပေါ်မှာငါ့ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့၊ရုပ်သံလိုင်းသိခဲ့ကြချိန်းတွေ့နှင့်ငါပြုတွေအများကြီးရ မေးခွန်းကကျွန်မလိင်ဘဝ။ ယခုငါပြုကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ဖို့အချို့အစိတ်အပိုင်းငါ့အသက်ကို၏။ ဒါကြောင့်၊ဤဆောင်းပါးသည်ကျမ်းစာအထွေထွေလမ်းအတွက်:အမည်များ၊အမွတ္ကိုးကားနှင့်အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ပါဘူးတွင်ဖော်ပြထားသောတိကျတဲ့အခြေအနေ။ အဓိကဤဆောင်းပါးသည်အကြောင်းအတွေ့အကြုံ ဖိလစ်ပိုင်လူ၊ဒီကနေကွဲပြားခြားနားစေခြင်းငှါ၊။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းလူများနှင့်ဇာတ်ကောင်နှင့်ဦးစားပေ...
အခမဲ့အိန္ဒိယချက်တင် ။ ပူးပေါင်းအစားဆုံးအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်။ ရောနှောအိန္ဒိယချက်တင်အပြည့်အဝရှိပါတယ်၊ပျော်စရာၡမ်ားပေပ်ာက္ေ။ အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့အိန္ဒိယမှာချက်တင်အခုအချိန်မှာလူရာပေါင်းများစွာဒေတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့။ အဘယ်သူမျှမကအခြားအိန္ဒိယချက်တင်ဆိုက်နိုင်မနှိုင်းယှဉ်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါမတစ်ခုတည်းနှင့်ကွာရှင်းလအနည်းငယ်အကြာ။ ယခုအခါသားသမီးကောင်းစွာအခြေချ။ ကြွင်းသောအရာအဘို့အကြှနျုပျ၏အသက်အဘို့အရှာနေပါရိုးရိုးသားသားနှင့်ရေရှည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူစစ်မှန်သောအချစ်။ မင်...
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့။ မသင်ချင်။ ကောင်းစွာ၊သင်အမြဲပဲလူတွေ့ဆုံရန်အတွက် မှာလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များ။ ညဦးယံ၌၊တစ်ဖီး၌ ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်နှင့်ပဲ။ သာပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်နဲ့ကိုယ့်သင်တို့အဘို့အ-အခမဲ့ပရိုဖိုင်း၊အခမဲ့အီးမေးလ်စိ၊န့်အသတ်ဓါတ်ပုံများနှင့်အယ်လ်ဘမ်။ တက်လက်မှတ်ထိုးဘို့မေတ္တာရက်စွဲများထွက်ရှာဖို့အတွက်သင့်ဇာတိမြို့။ သိမှရ -လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်လျှင်သင်ပွင့်လင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဆက်ဆံရေး။
တွေ့ဆုံရန်အခုဒီမှာမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်အပေါ်အခမဲ့ဝဘ်ဆိုဒ် ဆိုဒ္လိပ္စာ ဓါတ်ပုံများကြည့်မယ်၊သတင်းအချက်ထည့်ပါ။ ဒီအဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်များ၏ဆိုဒ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သစ်အသိအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ -အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ဘယ်မှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာအခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်အတွက်ယောက်ျားတွေနဲ့ချက်တင်၊အွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်နိုင်သူတို့ကိုခေါ်။ ထိုအခါအားသာချက်ယူမှုဆိုက်ရဲ့ထက်ဝက်-၁၀၀ ဂၤါ၊မ...
တွေ့ဆုံယခုဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တစ်ဝက်သာ ။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ၊အချက်အလက်ထည့်သွင်း၊သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်။ ဘင်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အဖုန်းနံပါတ်အဆိုဒ်၏အဖွဲ့ဝင်များအားကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သစ်အသိအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ -အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ဘယ်မှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာအခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေအတွက် နဲ့ချက်တင်၊အွန်လိုင်းသူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်နိုင်သူတို့ကိုခေါ်...
သာဒီနေရာမှာသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်တိုက်ရိုက်မိန်းကလေးများနှင့်ရွေးချယ်ချင်တာ။ မပိုဆုံးမဲ့စာရင်းအခန်းပေါင်းနှင့်အတူအပြည့်အဝသူတို့၏ ယောက်ျားလေးများ'။ ကျနော်တို့အရွေးအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ချည်ဖို့သင်အကြံပေး။ ကျွန်တော်လည်းလျောက်ပိတ်ဆို့အားလုံးကိုသင့်လျော်သောဗီဒီယိုများနှင့်အသုံးပြုသူများ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုယ်ရေးအချက်ရွေးချယ်စရာခွင့်ပြုသင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အသာလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများအုပ်စု။ ပွင့်မှလေးဘျကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်အခန်းတစ်ခုနှင့်အတူန့်အသတ်အရေအသုံးပြုသူမ...
ကျိန်ခြင်း၊ရေကြီးမှု၊နှောင့်ယှက်ခြင်း၊နှောက်ယှက်ခြင်း၊ဖိတ်၊ဆိုက်ဘာချက်တင်၊ခွဲခြားကဲ့ရဲ့ကြသည်မဟုတ်ခွင့်ပြုဒီချက်တင် ဝက်ဘ်ဆိုက်၏။ သင်အသုံးပြုလျှင်အိန္ဒိယ၊အဆင့်သတ်မှတ်၏။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊အိန္ဒိယကိုအွန်လိုင်းအခမဲ့ချက်တင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနှင့်တွေ့ဆုံ၊ဖလှယ်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာသတင်းအချက်၊အကြံပြုချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်အတွက်အိန္ဒိယအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်အိမ်ကနေအချိန်အတိုချက်တင်။ အိန္ဒိယအွန်လိုင်းချက်တင်အရပ်တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်အသိုင်းအတွေ့ဆုံရန်မှဘယ်နေရာမှာမဆိုအခင္လိႈင္ကခ...
လျင်မြန်၊လွယ်ကူပြီးအခမဲ့လော့ဂ်ကိုချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် ဘဲ။ -အသုံးပြုမှုများ၏လူမှုကွန်ယက်။ ပြရှာဖွေရေးရလဒ်များကို:ယောက်ျားသည်မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့အပြဿနာမရှာဖို့:-မခွဲခြားဘဲအသက်အရွယ်၏အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတစ်ဦးသည်လူအဘို့:-တည်နေရာကို:၊ဥဇဘတ္ကလက္ရွိအဘယ်သူမျှမဓာတ်ပုံပေါ်တွင်အသစ်အမျက်နှာရှာ။ ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်၏မြို့အတွက်ဥဇဘတ္ကစ၊သူအလျင်အမြန်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လူလူနှင့်အမျိုးသမီးမိန်းကလေး နှင့်အညီသတ်မှတ်ထားသော။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်သိလာအောင်သူ့ကိုနှင့်အတူစိတ်ဝင်စား...
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက်အဘို့ရှာသောသူတို့အိမ်၌ချိန်းတွေ့ဖၚျ။ ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်သာအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး၊ထို့နောက်နောက်တဖန်နှောင်းပိုင်းနေထိုင်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့နှင့်အလွန်အနည်းငယ်အချိန်။ သူထွက်ရှာသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက်အဘို့ရှာသောသူတို့အိမ်၌ချိန်းတွေ့ဖၚျ။ ငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်သာအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး၊ထို့နောက်နောက်တဖန်နှောင်းပ...
ချိန်းတွေ့နှင့်အတူယောက်ျားတွေ၊မိန်းကလေးများအတွက်ကေအင်တာနက်ကနေတဆင့်အတူ၊များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၊ရှည်လျားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သင်ကြားစေခြင်းငှါအများအပြားပုံပြင်များဘယ်လိုအကြောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်သင်အရစာန်များနှင့်ဖန်တီးတစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းမည် ၅၈၊နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးခဲ့သည့်ထက်မပိုတဲ့အနှစ်။ နှင့်အဘယ်သို့ ဒီ။ လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်အရေးပ...
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဖိလစ်ပိုင်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဒီနေရာမှာသင်ပြုဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူဒေသခံဖိလစ်ပိုင်စိမ်း။ ဘယ်မှာသင်တွေ့လိမ့်မည်ဖိလစ်ပိုင်စိမ်းအားဖြင့်ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။ ဝင်ရောက်စဉ်ကိုဖိလစ်ပိုင်စကားပြောခန်းသင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်အမည်မသိလူတစ်ဦးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျပန်းကိုး။ ရှိမရှိအတွေ့အကြုံများစိမ်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှဖိလစ်ပိုင်၊အခမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဖုအဖုချက်တင်၊အွန်လိုင်းရှိစိမ်းတွေ့ဆုံ၊ကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူယောက်ျားလေးများ...
ချိန်းတွေ့ရှည်လျားပြီးအမြားအရာ၌အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဤမိသားစုများနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ကြသည်၊နှင့်အစ္သက္ခဲ့သာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်အပျက်အတွက်ညဦးယံအချိန်အတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရှည်လျားခဲ့တယ္။ ချိန်းတွေ့အတွက် ပြုသည်မှာငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊အဖြစ်အများဆုံးမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပရိုဖိုင်းမှာလူရာပေါင်းများစွာ၏စုံတွဲ။ ဒေသမဟုတ်အသေးဆုံးအတွက်ယူကရိန်း။ ထို့ကြောင့်၊ကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်တစ်ခု၏နမူနာပံုစံမ်ား။ ရှာဖွေခြင်းသင်ချစ်တဦးတည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအပြားအားသာချက်များကိုကျော်ချိန်းတွေ့လမ်းပေါ်မှာ:န...
ချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၊ကလေးများ၊အကဲအများစုကအခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သုိလ္ေ။ အားဖြင့်ချိန်းတွေ့နှင့်သှေးဆောငျ၊အင်တာနက်ကိုလည်းဖန်တီးများအတွက်လိုအပ်သည်ခိုင်ခံ့သောမိသားစုအနာဂတ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈ ကွာရှင်းလူ သို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ပါ။ မျှော်လင့်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ယခုအဟ။ အျခားေချိန်းတွေ့ဆိုက်သုိလ္ေ -လင္းရှိပါတယ်၊အအောင်မြင်ဆုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်ဆံရေး။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လူတိုင်းရရှိ...
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသည်လောလောဆယ်အသုံးပြုများ၏အများစုမှာရုရှား။ ဒါဟာအဆငျဖြစ်ပါသည်၊အကျိုးရှိစွာနှင့်၊အားလုံးအထက်၊အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဤပလက်ဖောင်းအတွက်အထူးသင့်လျော်သူများဖြစ်ကြောင်းလွန်းမင့်တွက်ဖော်ပြနာစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊အခုရတဲ့ကျွမ်းမှာသတိထားပါ၊သင်သွားကြဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြုပြီး၊ပြောပြရန်ကြိုးစားနေပါ၏ဦးစားပေးအရာဝတ္ထု။ လေ့လာမှုအမးခြန္း၊ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်ကိုသင်ရွေးချယ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ထိုက်သင့်သူငယ်ချင်း၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့...
ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်မကျရောက်ရန်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အလိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျေးလက်။ မွေးမြူရေး-အနုပညာရှင် ၆၀ နှစ်အရွယ်မှာအစည်းအဝေးအခုဒီမှာမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်အပေါ်အခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် သာ ။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ၊အချက်အလက်ထည့်သွင်း၊သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်။ ဘင်ဖြစ်ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ဆိုက်အဖွဲ့ဝင်များကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့သစ်အသိအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ -အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ဘယ်မှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခုအချိန်မှာအခမဲ့။ သင်တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေ...
သင်ဆဲသံသယအရောင်နှင့်မိသားစု-အမာမိန်းကလေးငယ်များ? ကျွန်တော်ကူညီနိုင်။ ကိုယ့်မှာကြည့်ရှု၏ရလဒ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်။ သင်ဟာရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီး? အောက်မှာတွေ့လိမ့်မည်ဘယ်လောက်ပေါ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လမ်းညွှန်ကိုဖွင့်ဖို့ဆက်သွယ်ခြင်း၊လာမယ့်အဘယ်သို့ပြုရမည်၊ဘယ်လိုမှနောက်ကျောကိုရယူပါ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့င့်။ သူယောက်ျားနှင့်အတူမေတ္တာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနှင့်အတူစတင်အမျိုးသမီးရဲ့ပြခန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးအကြောင်း။ စကားမစပ်၊သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဂျင်စီသာရှိပါတယ်ဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များအာ...
"ငါချင်လုယူသောသင်ပိုက်ဆံနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်ပေးသည်။"ကောင်းကင်တမန်ကနေ လိုယောက်ျားလေးမှစင်ကြယ်စေများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ပင်လျှင်၊ဒါကြောင့်ကျိုးပဲ့ပျက်၊ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆန္ဒရှိဖို့သင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ သူမ၏တည်နေရာသည်ဂို့၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များလွဲချော်၊အချမ်းသာသကြားရိုက္ေသာ။ သူမကငွေအလုံအလောက်ပေးဆောင်ဖို့နိုင်လျှင်သင်ကျေနပ်အောင်သူမ၏အိပ်ရာအတွက်။"ငါချင်လုယူသောသင်ပိုက်ဆံနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်ပေးသည်။"အကောင်းကင်တမန်၏ လိုစင်ကြယ်သောယောက်ျားလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ပင်လျှင်၊...
Pendaftaran gratis untuk Kencan
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယို အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ကန့်သတ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး စူးစမ်း ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့ ၁၈ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ ၂၄
© 2021 ဗီဒီယိုစကားပြော№၁-ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများအြန္လိုင္း